मलाई किन मेरो बच्चालाई अंग्रेजीमा पढ्न सिकाउन आवश्यक छ ? यो प्रश्न आफैलाई सम्भव छ, सम्भवतः एक परिवारले होइन, जसले बच्चाहरु को शैक्षिक केन्द्रमा क्रिम दिने योजना बनाउँछ। तथ्य यो हो कि आधुनिक संसारमा, अंग्रेजी को बिना जानकारी को बिना, एक व्यक्ति को एक कठिन समय छ: जब एक नौकरी को लागि काम गर्दै, एक राम्रो विदेशी स्तर एक प्लस हुनेछ, र दुनिया को खुले यात्रा को अवसरहरु। यसैले धेरै शिक्षकहरूले विश्वास गर्छन् कि अंग्रेजीमा पढ्न बालबालिकालाई पढाउन सबै भन्दा राम्रो छ जब उनी अझै पनि सानो छ। त्यसैले बच्चा विद्यालयमा विदेशी भाषा सिक्न सजिलो हुनेछ । तथापि, न केवल पढाइलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ, तर बोल्न र सुन्न पनि आवश्यक छ। तर यस लेखमा, हामी कसरी बच्चाहरूलाई अंग्रेजी पढ्न सिकाउन सिकाउँछौँ, त्यसैले यस भाषामा यो रुचि छ।
नवीनतम प्रविधि वा राम्रो पुरानो पुस्तकहरु?
त्यसैले, तपाईंले आफ्नो बच्चा अंग्रेजी पढाउन सुरु गर्न सबै खर्चहरू निर्णय गर्नुभयो। कुन तरिका प्रयोग गर्ने? बच्चालाई पत्र पढ्न वा सम्पूर्ण शब्द सम्झना दिन सिकाउनुहुन्छ? कविताहरु संग किताबहरु को प्रयोग गर्नुहोस या खिलौने बोल्नुहोस। निस्सन्देह, तपाईले बच्चालाई अंग्रेजीमा पढ्न सिकाउनुभन्दा पहिले, धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्। सबै पछि, यो केवल मेकिकल पढ्ने कुरै नखोज्न महत्त्वपूर्ण छैन, तर उनीहरूलाई इन्टरनेट भाषामा माया र चासो लिन।
वर्णमालाको बारेमा बिर्सनुहोस्
बच्चालाई वर्णमाला परिष्कृत गर्न बल नदिनुहोस्। त्यसैले बच्चाहरूलाई अंग्रेजी पढ्न सिक्नु पनि अझ गाह्रो हुनेछ, किनभने, जान्दछ, यस भाषामा, धेरै शब्दहरू पढेका रूपमा पढ्न नसक्ने जस्तो छन्। यसबाहेक, तपाईंले किन फेरि बच्चालाई पुन: राख्नुपर्छ, ए हो भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्नुपर्दछ, "हो", तर हामी यसलाई "ई" रूपमा पढ्न सक्छौं। चुम्बकीय अक्षरहरू प्राप्त गर्नुहोस्, तर बच्चासँग वर्णमाला को याद नगर्ने, तर यसकारण कि बच्चाले मात्र अंग्रेजी अक्षरहरू के गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं अनुहार पत्रहरू परिचय पत्रमा पठाउन सक्नुहुन्छ, र अंग्रेजीमा पढ्न कसरी सिकाउन बच्चा सिकाउन, तपाईं पछि केही सोच्न सक्नुहुनेछ। निस्सन्देह, एक प्रश्नोत्तरकय बच्चाले के हो कि त्यो पत्र उनको सामने के हो। यो अलगावमा नबिर्सनुहोस्, बच्चालाई कसरी वर्णित छन् भनेर व्याख्या गर्नुहोस्, केवल शब्दहरूको उदाहरणहरूमा।
हामी कार्डहरू द्वारा पढ्न सक्छौं
अङ्ग्रेजीमा पढ्न बालबालिकालाई पढाउने अर्को साधारण तरिका विषय र एक शब्दको साथ रंगीन कार्डहरू तैयार गर्न हो। उदाहरणका लागि, तपाईंसँग एक बिल्ली रेखाचित्र र अंग्रेजी शब्द "एक बिरालो" हुनुपर्छ। विषयवस्तुहरू द्वारा कार्ड विभाजित गर्नुहोस्: परिवार, जनावरहरू, सब्ज र फलफूल, बिरुवा, लुगा, फर्नीचर, आदि। शब्दहरू धेरै जटिल, सम्झन सजिलो र प्राय: भेट्न हुँदैन।
अंग्रेजीमा केही मिनेट खर्च गर्नुहोस्: उदाहरणका लागि, तपाईं विषयवस्तुबाट "केही शब्दहरू" सिक्नु चाहानुहुन्छ। आवश्यक चीजहरूको छविको साथ कार्डहरू निकाल्नुहोस्: कपडा, पतलून, शर्ट, स्कर्ट, सम्बन्ध। बच्चाको साथ पास गर्दै, तपाईं "अनन्त रूपमा" शब्दहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई बच्चालाई पढ्नुहोस् र सफा गर्नुहोस्। समय संग, बच्चा तपाईंको पछि दोहोरिन्छ: त्यो शब्द र उनको उच्चारण सम्झना हुनेछ। त्यसपछि उनीसँग यी शब्दहरू फरक सेटिङमा दोहोर्याउनुहोस्: प्रत्येक अङ्कमा तपाईको औंला सार्नुहोस् र सम्पूर्ण शब्द भन्नुहोस्, अर्थात्: बिरालो - "के-ई-टी", "दूध" - "एम-एन्ड-क-क"। त्यसपछि, तपाईं चित्रबाट शब्दहरू काट्न र कुंठालाई वांछित छविहरू अन्तर्गत नामहरू विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, बच्चाले एक शब्द उच्चारण गर्नु पर्छ, एक कार्ड जसलाई उसले आफ्नो हातमा लिन्छ।
धेरै निर्माताहरूले दावा गर्छन् कि शैक्षिक खिलौनेले बच्चाहरूलाई पढ्न सिक्न मद्दत गर्नेछ। त्यसोभए बच्चाले चित्रमा क्लिक गर्दछ, र खिलौनेले अंग्रेजीमा यसको नामको वर्णन गर्दछ। तथापि, आमाबाबुको थप सहयोग बिना, बच्चाले पढ्न सिक्न, तर सुन्नु हुँदैन। Croche अझै पनि तपाईंलाई प्रत्येक शब्द औंला गर्न र एक शब्द बोल्न आवश्यक छ, बिना यो बच्चा कान कान भाषा, बुझ्न पनि उपयोगी छ सिक्न, तर पढ्न पढाइमा मद्दत गर्दैन।
त्यसोभए यदि तपाईले बच्चालाई प्रारम्भिक उमेरबाट विदेशी भाषा सिक्न मद्दत गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, याद गर्नुहोस् कि शिक्षालाई औपचारिक बनाउन आवश्यक छैन, सबैलाई रचनात्मक रूपमा र चासोको साथ आवश्यक आवश्यक पर्दछ।
का कसरी बालिका लागि प्राथमिक स्कूलको लागि पोर्टफोलियो बनाउन बारेमा कुरा गरौं
अक्सर sneezing नवजात शिशुहरु: कारणहरू र समाधान
Lactose-मुक्त मिश्रण छ: जो, किन?
कसरी फूल को एक फूलगुच्छा आकर्षित गर्न। उपयोगी आशय
रूसी भाषा मा एक बयान कसरी लेख्न? एक संक्षिप्त खाता कसरी लेख्न?
होटल, Sergiev Posad: विवरण, ठेगाना, समीक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय राजधानी बजार
गोभी रोल र जुलेन को लागि पाक कला सॉस
स्पार्टन - एक देखाउँछ कि साहस, बल र साहस टाटु